Raasamaalnimada iyo dimoqraadiyadda shanaad, wadada gaabisa ee wadajirka shuuciga: Martin Vrijland
Raasamaalnimada iyo dimoqraadiyada shaam, waa wadada ugu gaagaaban fasiisnimada shuuciga
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 25 November 2019	• 19 Comments
Haddii aad aqriso cinwaanka maqaalkan, waxaa laga yaabaa inaad jahwareersan tahay oo aad la yaabban tahay waxa fikradda ka dambeysa taas!? Haddii sanadihii ugu dambeeyay aad taxadarka siinaysay, waxaad awooday inaad ogaato laba waxyaabood oo muhiim ah. Waxaan marwalba aragnay in shirkado ama warshado ay kacaan oo ay la wareegayaan dalal ama dad aad u tiro badan, waxaana marwalba marqaati u nahay balanqaadyo siyaasadeed oo been abuur ah iyo khiyaanooyin iyo khiyaano, oo ay ku xigto dowlad dhexe iyo awood boolis dheeraad ah. Tusaalooyin fara badan oo waaxyo kala duwan ah sida soo saaraha dayuuradaha reer Fokker ama kuwa hadda la jooga beeralayda. Tusaalooyin fara badan oo ku saabsan siyaasadda siyaasadeed ee ay ku yaalliin xoog iyo awood badan xagga Yurub iyo xeerar aad u tiro badan iyo booliis.
Si kastaba ha noqotee, barta ayaa ah in wax walba had iyo jeer loo soo bandhigo sidii 'lagama maarmaan'; Tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee ka dhasha dhibaatada qof walba saameyneysa, si aan u qaadanno cabbirka. Argagixisanimadu waxay ku fiicneyd sharciyada isdaba-marinta. Faragalinta siyaasadeed ee Ruushka ama warar been abuur ah ayaa sabab u ahaa faafreeb dheeraad ah. Dembiyada, "dadka wareersan" iyo maafiyada ayaa xaqiijinaya xitaa xabsi ka fudud oo dheer waana sii wadi karnaa muddo. Aniga buugga cusub Waxaan sharraxayaa xariiqda ballaaran ee khiyaanada iyo khiyaanada ee lagu adeegsado maxim Dhibaatada, Falcelinta, Xallinta, taas oo hawlo nafsi ah (PsyOps) gaar ahaan lagu ciyaaro warbaahinta si looga naxo dadka kadibna loo bixiyo xalka qaab sharci adag.
"Haa, laakiin si looga hadlo fasiisadda hadda? Taasi maysan waxoogaa fogeyn Vrijland? Kuma nooleyn Naasiya Jarmal, ma waxaan?"Halkaas waxaan ku aragnaa in dadka intooda badan ay wali ku raad joogaan buste ceeryaamo ah oo ay warbaahintu indhaha saarayso. Taasi waa sababta cinwaanka buuggaygu yahay 'Xaqiiqada sidaan u aragnay'. Haddii aad aqriso buuggaas, waxaad ogaan doontaa inay run ahaantii jirto wada jir isku jir ah oo loo yaqaan 'Truman Show (ka dib filimkii caanka ahaa ee ka soo baxay 1998).
Ma ogtahay, tusaale ahaan, qulqulkaan khatarta ah ee soogalootiga inuu wax badan u ahaa dalal dhowr ah oo Yurub ah? dayrka weyn si xuduudaha loo dhiso? Muxuu Donald Trump mar kale ka qabanayaa xadka uu la leeyahay Mexico? Ma laga yaabaa inaad ka baqdo sawirro soogalootiga muslimiinta halista ah, sababtoo ah xaddiga (is-abuuray) ee xiisadda ayaa si sax ah u ahayd ciyaartii duugga ahayd ee 'qaybsanaanta iyo xukunka' ee heerka xukunka? Ka waran haddii Utrecht Mocro Mafia waa sida is-abuuray haddii ISIS iyo Al Qaida ay taasi ahaayeen? Maxaa dhacaya haddii gobolku dhiirrigeliyo xasilloonida laftiisa inay awood u yeeshaan inay geyso booliis aad u tiro badan? Ka waran haddii qulqulkaas halista ah ee qaxoontiga uu iskiis u abuuray dagaal dagaal iyo (mushaar) qaxooti laga keenay woqooyiga Afrika, si ay awood ugu yeeshaan in la xiro xuduudaha. Weligaa ma tixgelisay waxa ay taasi ka dhigan tahay marka maaskaro macaanku si lama filaan ah uga soo baxo wejiga taliska oo aad aragto waji fallaag ah? Markaa dayrkaas ayaa kuu yaal adiga. Markaas ka dib kama carari kartid.
Ka waran haddii dhammaan deyrarkaani yihiin hareeraha xuduuda Yurub iyo heerka xukunka uu khalkhal ku abuuro Yurub isagoo dhaqaalihi ku abuuraya dhaqaalaha si loogu abuuro shuruudaha duulaanka waddan leh hoggaamiye xoog leh (ka fikir dabayaaqadii '30 ka qarnigii la soo dhaafay) yaa u socda amar? Ka waran haddii hogaamiyahaas xoogga badan uu heshiis la gaaro guddiga jira ee hadda jira ee Brussels iyadoo loo beddelayo rabshado yar intii suurtagal ah si ay xukunka ula wareegaan? Waxaan sanado badan sameynayay saadaalin ku saabsan dalka uu noqon doono. Oo ma ogtahay sida looga iibin doono adiga? Sida saxda ah, mar labaad sida xalka dhibaatada oo markale ayaad uqalmi doontaa. Xaqiiqdu waxay tahay wali dhamaan dayrarkaasi inay jiraan. Xaqiiqdu waxay tahay wali (isla waqtigaas adag) xeerarka iyo booliska aadka u hubeysan ayaa hubin doona inaadan bixi karin. Mar dambe ma awoodi doontid inaad ka cararto booliiska lafteeda adigu. Laakiin nasiib wanaag badankoodu way indho tiraan xaaladda ay ku sugan yihiin, ilaa inta gurigooda iyo jardiinadooda ay hagaagsan yihiin.
Fadlan aqri taxanaha maqaalkeyga usbuucii hore si aad u hesho xoogaa yar oo ah sida ay arrimuhu u socdaan. Xeryaheena dib-u-soo-celinta waxbarashada waxaa lasiiyay George Orwell 1984 news title 'daryeel'. Daryeelka dhalinyarada ama daryeelka caafimaadka dhimirka (GGZ). Cilmu-nafsiga waxay diyaar u yihiin inay ka saaraan kuwa kacdoon wadayaasha ah guryahooda. Haddii aadan iskaashi la yeelan, si arxan-darro ah ayaa laguu geysan doonaa oo laguugu ridi doonaa qolka si aad u fiirsato si aad u aragto haddii aad ku tusi karto dabeecad jahwareer leh. Waxaan helaa tusaalooyinka tan horeba uga dhacay gudaha sanduuqkayga booska waxaana jira fursad fiican oo ah in tirada kiisaska xanibaadda ahi ay daadad ku soo dhacaan santuuqa boosta, maxaa yeelay 2020 sharciga khasabka ah ee daryeelka caafimaadka dhimirka (WvGGZ) si fudud ayaa loogu soo bandhigi doonaa. Codsiga sharci darada ah inta lagu jiro weli aan jiritaanka sharcigan wuxuu ka muuqdaa tusaalooyinka aan helayo. Si kastaba ha noqotee, dib dambe uma daabaco kiisaska shaqsiyadeed, sababtoo ah tani waxay qatar gelineysaa nabadgelyadayda iyo tan dhibbaneyaasha rabshadaha bilayska iyo xadgudubka caafimaadka maskaxda.
In maqaalkani Waxaan bixinayaa sharraxaad faahfaahsan ee naxdinta leh ee ku saabsan samayntaan oo waxaan sharraxay sababta tan loogu barbardhigi karo nadiifinta fal-dambiyeedyadii Midowgii Soofiyeeti hore. Waan kuu sheegi karaa: hore ayey u dhacday qof walbana wuxuu u maleynayaa inaysan shakhsi ahaan u saameyn doonin iyaga, laakiin qodobkaas waxaan sidoo kale ku siinayaa tusaale wax ku ool ah oo sida ugu fudud ay ugu dhici karto noloshaada, adigoon dooneynin inay ku cabsi geliyaan.
Loogu talagalay kuwa aan indho-indheynin ama helin indhoolayaasha (ama kuwa kale ee aan si fudud u xidhin) doonayaan maxaa yeelay iyagu laftooda waxay ka shaqeeyaan warshadaha daryeelka caafimaadka ama booliska iyo garsoorka) waxaa laga yaabaa inay durba muuqato inaan ku nuuxnuunno nidaam fasiisimo, laakiin markaa su’aashu waxay tahay waxaan ula jeedaa wadajirka
Shuuciyadda waa fikir bulsheed, siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo loogu talagalay xaqiijinta jawi aan caadi ahayn iyo hantiwadaag, kaas oo ku saleysan lahaanshaha wadajirka ah ee wax soo saarka iyo hay'adaha dowliga ah, taas oo qof walba uu soo saaro iyadoo loo eegayo awoodooda iyo baahidooda. Ereyga wargelinta ka soo degay Latinka communis, oo macnaheedu yahay mid guud iyo mid guud. Hadda, iyada oo ay sii kordhayso cabirka wershadaha iyo beeraha iyo xoolaha, awoodda ayaa si otomaatig ah u noqotay udub dhexaad. Waxaan dhihi karnaa waxay ahayd cawaaqib dabiici ah oo ku saabsan abuuritaanka ganacsi caqli gal ah (oo xiriir la leh kaabayaasha) of waxaan ku soo gabagabeyn karnaa in lacagta ugu badan ay had iyo jeer la jirtay kooxda aristocratic ee awooda u laheyd sameynta waxaas weyn Riyada Mareykanka si maaliyad ah u maareeya meheradda "galbeedka xorta ah", oo abuuri kara kooxo-mega. Su’aasha kaliya ayaa ah inaad rumeysan tahay riyada Mareykanka ama aad aragto in indhahayaga indhaha laga xirtay taas iyo in ganacsi wanaagsani badanaa uusan ka dhicin uun buluugga.
Aniga oo aan si waafi ah u caddayn halkan, waxaan ku doodayaa in suuqa xorta ah uusan waligiis xor ahayn, laakiin lagu maareeyay gadaashiisa iyadoo la adeegsanayo qaab dhismeedka awoodda (oo ah qaab bulsheed qarsoodi ah oo ku dhexjiray dhammaan qeybaha bulshada, oo ay kujiraan siyaasada) iyo warbaahinta). Natiijo ahaan (faafay sannado badan), waxaan ka shaqeynay xaalad shirkado loo oggolaaday inay noolaadaan oo koraan, oo ay sii kordhayaan kor u qaadista. Kororkan cabirka ah wuxuu hadda si qarsoodi ah u keenay bulshada adduunka hoos-u-dhigga wadaagga tirada badan ee dadkaas. Aniguna xagga sare ee barayaashaas waxaan kula kulmi karnaa mudanayaal iyo marwooyin heerka sare ee bulshada. Aasaaska maamul wadaaga shuuciga ah ayaa sidaas darteed dhab ahaantii horeyba loogu dhigay heer dhaqaale. Mar dambe ma iibsan kartid barandho ama gabal hilib ah waxaadna ogaan kartaa hubaal haddii ay ka timid beero guri ku koray. Wax walba waxay ku tiirsanyahay caalami ahaan midba midka kale iyada oo loo marayo soosaar ballaaran iyo shabakadaha qaybinta.
Iskeed wax khalad ahi uma eka qaabka loo wadaagayo, sida wax aan khaldan ugu jirin qaabka ugu wanaagsan ee dimuqraadiyadda. Si kastaba ha noqotee, taariikhdu waxay muujisay in labadaba qaabkooda ugu fiicnaa waligood aysan jiri jirin weligoodna lagu xukumi jiray isla koox isku duug ah oo isku khilaaf ah. Fiiri Mareykanka (iyo waddamada reer galbeedka ee isbahaysiga NATO), kuwaas oo isku dayaya inay dimuqraadiyadda meel walba oo adduunka ah ka dhigaan bambo iyo bambooyin sababay malaayiin dhimasho. Fiiri Midowgii Soofiyeeti hore. Hadana waxaan sii wadnaa rajo iyo rajo, illaa iyo inta aan shaqooyinkayaga hayn karno oo aan fasax u tegi karno ama booqanno dabaaldegyadayada laba jeer sanadkii. Xaqiiqdii, qofka iskucelceliska ah kama walwalo wax badan oo ku saabsan waxa ka dhacaya hareerahooda ilaa uu runtii taabto.
Waxaad si fudud u gaari kartaa tallaabada ugu dambeysa ee dowlad wadaag ah oo leh dhibaato caalami ah oo noo horseedda inaan helno meeraha aan la isku halleyn karin dhowr sano gudahood. Dhibaatadaas micnaheedu waa inaad ogaato sida saxda ah ee ay dadku cunayaan iyo inta ay culeyska ku hayaan deegaanka. Waxaan uga tagnay saldhiga sayniska ee dhibaatadaas dhexe (eeg halkan en halkan wixii sharraxaad dheeri ah). Awoodda dartood, aan u qaadanno in aan dhammaanteen dhowr sano ku dhiman doonno dhowr sano gudahood. Markaa taas ayaa ah dhibaatada ugu fiican ee lagu hirgalin karo wada-noolaanshaha adduunka oo dhan.
Xalka burburka dunidan ayaa ah in wax walba waa in lagu habeeyo si habeysan, loo xakameeyo loona kormeero sida ugu dhaqsaha badan si loo ogaado sida saxda ah, meel kasta iyo meelwalba sida saxda ah ee la cuno iyo sida ay u weyntahay (dhabta ama aan jirin) deegaanka raad-raac Marka hore, haddii aad ka dhaadhiciso tirada badan ee dhibaatadan, waxaad horey u asaas u dhigtey asaas macquul ah oo ku saabsan soo saarista nidaamka xakamaynta adduunka oo dhan. Haddii markaa markaa isla muddadaas aad dhibaatadan dul dhigeyso retina, waxaad u horseedi kartaa xiisad dhaqaale oo caalami ah iyo xasillooni darro bulsho oo dhex marta kooxo dad ah (midba midka kale iyo kuwa kaleba) ku jiraan timaha, ka dibna sidoo kale waad adkaan kartaa soo dhex gal si aad xanuunka u yareyso adigoo soo bandhigaya fikrad wadaag ah oo ku saabsan daqliga aasaasiga ah. Daabacaad kasta iyo xubin kastoo fikirka ka mid ah ayaa markaa lagala socon doonaa hadda, laakiin haddii qof walba uu helo maro dhiigbax ah (dakhli aasaasi ah), waxay bulshada u horseedi doontaa nabad. Ordo ab Chao, ciyaar duug ah oo ka socota isla da'da da'da ah xukun aristocratic fasalka.
Amro imminka buuggayga oo aan sharraxaad dheeraad ah ka siiyo ajendaha weyn iyo qoraalka aan u aragno in la duubo iyo sidoo kale sharraxa halka xalka ku yaal
2023 Sanadka Europe oo ku biiray Boqortooyada Ciraaq
Ceebta 'cimilada diida' cuqdadu waxay kuxirantahay fikradaha shirqoolka, siyaasada garabka midig iyo dareenka indhaha
Tags: aristocracy, wargelinta, dimuqraadiyad, EU, featured, qarsoodi ah, bulshada, raasamaal, kala-duwanaansho
Chekinah ayaa qoray:
25 November 2019 ee 18: 43
Maqaalka Super mar labaad Martin. Isla waqtigaasna waan dhammeeyey buuggaaga oo haddana waxa ii soo jiitay indhaha qaar indhaha ka la '. Waad ku mahadsan tahay dadaalkasta oo aad sameyso si aad dadka uga toosiso. Waa shaqo adag oo qaar badani ma doonayaan inay ogaadaan ama arkaan. Laakiin waan sii wadi doonnaa.
Dick Klein Oonk ayaa qoray:
25 November 2019 ee 19: 52
Sheeko wanaagsan Martin. Waxaan u akhristay sidii sharraxaad fudud oo ku saabsan Borotokoolka Siyoon iyo odhaahda / aragtida ka dhex jirta xisbiyada shuuciyadda. Wejiga u dambeeya ee halganka u dhexeeya kaabaya iyo hanti wadaaga wuxuu noqon lahaa guusha wadajirka. Haddaad uun sii waday dagaalka .. Wejiga ugu dambeeya oo hal-ku-dhiggiisu yahay ... Qeexiddii proletariat-ka. Waxaan ku dhiirrigelinayaa waxaan leeyahay in hantiwadaagga / Commnists-ku yihiin "pawns" qorshaha weyn. Sida qof kasta oo kale oo ka tirsan siyaasada iyo msm.Even The Capital ... buugga wadaaga kombuyuutarrada ayaa lagu qoraa sal ahaan. Kaligii-isu-dhigga proletariat-ka,, oo dadku iyagu ayaga laftooda u doortaan .. sidaad u sharaxday.
Mindsupply ayaa qoray:
25 November 2019 ee 20: 24
Tani waxay umuuqataa mid mawduuc ka baxsan. Laakiin dhab ahaan maahan. Waad ogtahay, uma dhahayo inay caqli leedahay inaad caruur ku dhasho dunidan (waana sababtaas aniga aanan haysan). Laakiin haddii aad iyaga hesho, markaa wax la mid ah ayaa ku dhaca oo kaliya bulshada fallaagada ah. Heerka ugu sarreeya ee cadaadiska faca iyo waxa kaliya ee ah '1' oo aadan sameynin baaritaan ku filan, ayaa carruurtaada u rogaa .. Haa, naftaada u fiirso .. Qalbi-jab…
Hadaadan hubin inaadan mar labaad isqalin .. Markaa laga yaabee inaad tahay kan kuxiga ... ama ka sii xumaatay waqtigaas ..
25 November 2019 ee 20: 47
Horey ayey u sameysteen ereyga dhaqdhaqaaqa fikirka cusub, oo ah 'Wada xiriirka', xorriyadda shaqsiga ayaa hoosta ka xarriiqeysa tan kooxda. Waa hagaag halkaan ku aragnay intaas ka hor ...
Teknolojiyada (AI) + Isgaarsiinta = Nidaamka 'SMART Gulag' oo qof walba dhowaan lagu xukumi doono, dabcan dadku dabcan way la socon doonaan waqtiyada iyo natiijooyinka Shiinaha way fiicnaanayaan.
26 November 2019 ee 10: 13
Yurub gudaheeda hadda iyo sannadihii 4 ... oo xusuusnow in ereyadii ugu dambeeyay ee wareysiga ah ee Tahir Hamut ee filimka la soo saari doono in muddo ah aan shaqeyn doonin.
Netherlands, England, Sweden iyo dalal kale oo badan ayaa horeyba u leh shabakado ballaaran oo kaamirooyin ilaalin ah, halkaana wax waliba waxay ku dhacaan halista suurtagalka ah ee argagixisada muslimiinta iyo waxyaabaha sida maafiyada maandooriyaha. Cilmiga ugu cusub ee albiisi dhowaan noqon doona wuxuu noqon doonaa '' cagta cagta ''. Dhammaantood waxaa lagu soo bandhigayaa heerar, laakiin waxaan arki doonnaa boolis aad u tiro badan iyo ilaalin dheeraad ah. Laakiin nasiib wanaag dad aad iyo aad u tiro badan ayaa shaqo ku leh korjoogteynta, booliska ama garsoorka (ama dadka la xiriira sida CJIB, tababar, la tashi ama ICT) ama caafimaadka maskaxda “daryeelka” (akhriso: kaamam dib-u-waxbarasho). Dadkaas ayaa dareemaya wanaag, sababtoo ah mushahar wanaagsan, guri-dhiqle iyo xaflad usbuuc kasta.
26 November 2019 ee 10: 51
Ma aqaan, laakiin waxaan si dhib yar ugu arkaa argagixisada muslimiinta ah ee Nederland laba ka mid ah kuwa laga yaabo inay u adeegsadeen adeegyada sirta oo loo adeegsado qoraalka wiilasha ee fal-celinta.
Muslimiinta Nederland sidoo kale waa muwaadiniin wanaagsan guud ahaan mana badali karaan ama ma baddali karaan heerka loo qoondeeyay. Jihaadka sida uu sheegaayo diinta islaamku si fudud ayaa la iloobaa haddii qofka muslimka ahi guud ahaanba helo shaqo fiican? qoraalka ayaa lagu bedelayaa ogolaanshaha degenaanshaha, lacagta, iwm. Waa qalad weyn in New Brave Madurodam wax walba waa inay ahaadaan danaha wiilasha, qoraalka iyo heerka ay ku jiraan wiilasha qoraalka. Waxaan durba ku jirnay kalitalisnimo haddii kale waxaan wici karnaa nin bilaash ah iyo faras oo waxaan beddeli karnaa xaaladda. Taasi suurtagal maaha! Waa waddo hal dhinac ah.
26 November 2019 ee 11: 13
Tusaalaha wanaagsan ee barnaamijyada warbaahinta guuleysta waa jawaabta soo socota:
"Ma haysatid wax aad qariso, ma arko waxa khaldan ee tani. Si aan u helno oo aan u ilaashano waddankeenna iyo Yurubna waa inaan sugnaa. Haddii aadan sidaas u fakarin, markaa adiga ama qof reerkaaga ka mid ah ama saaxiibbadaa la mid ah kuma dhici doonno inaad ku dhacdo weerar argaggixiso. Yurub waligeed isku mid ma noqon doonto. Waxaanna ku leenahay taas nacasyada bidix ee garabka bidix kuwaa oo hadda sheeganaya in jeegaan aan suuragal ahayn. Hadana u yeer in tallaabadani aysan suuragal ahayn. Iyagu waa xuub kaadi-galeen ah oo kaadi haysta. Caan ka dambeysa Green Left iyo SP iyo D66 sii wadaan inay qulqulaan waa taladooda. Dalkeenii qurxoonaa ee Netherlands ayaa hadda dhammaaday. Waad ku mahadsan tahay iyaga oo u mahadcelinaya Rutte iyo golihiisa wasiirrada. Dhammaantood waa beenaalayaal.
Waxa akhristahaani uusan ka warqabin ayaa ah in argagaxiso laftiisa la abuuray. Reer Galbeedka ayaa abuuray ciidan u gaar ah Al Qaacida iyo IS si ay u bilaabaan dagaalo wakiil. Isku mid ayaa lagu dabaqaa dambiyada badankood (sida dawooyinka "Mocro mafia"). Fikradda ah in dhammaan "argagixisada" ay imaan doonaan Yurub waxaa lagu dhejiyaa kabaha bidixda, laakiin looma arag in tani ay tahay ulajeeddadu. Dadku waxay jecel yihiin inay abuuraan fowdo si ay u abuuraan nidaam. Ku eedaynta bidix iyo ka soo laabashada midig iyo in ka badanba waxay u adeegtaa kaliya ujeeddada dadka lagu siinayo khayaanada doorashada iyo dhisida beerta bidix ee xiisadda. Waxaan ku sharaxay ciyaartaas qormooyinkayga hore.
Fikradda ah "hadaadan haysanin wax aad qarinaysid" waxaa isticmaala oo keliya dadka aan arki karin muuqaalka weyn isla markaana doonaya inay dareemaan inuu ilaaliyey aabahay super state; iyada oo aan laga warqabin in gobolka aabihiis uu si ula kac ah u abuuray argagixiso wakiilnimo ah si loo soo bandhigo guud ahaan booliisnimada.
26 November 2019 ee 16: 59
Waxaan saadaaliyay mid ka mid ah hawlgalka calanka beenta ah ee weyn ee ka dhacaya London / Paris ama wax guud ahaan lagu qabanayo ama lagu haysto. ISIS (Gladio B) ayaa mar kale laga saari karaa meesha xasilloonida, Brexit ayaa dib loo dhigay mar kale iwm. Iwm
26 November 2019 ee 17: 06
waa hagaag, halkaan waan tagnaa, maahan dadka qaaliga ah ee qaaliga ah
26 November 2019 ee 20: 29
mise waxay sameynayeen aqoontooda shaqo? , waxbarashada iyo wax walba waxay ku saleysan yihiin Zoetermeer
27 November 2019 ee 17: 36
taasi waa si cad oo ku saleysan kadhan ... qufac
https://www.npostart.nl/nieuwsuur/26-11-2019/VPWON_1303325 (Laga soo bilaabo 4: 23, Zoetermeer waa la yaqaanaa ...)
29 November 2019 ee 21: 52
zalminblik, ma amaahan karaa kubbadaada galaaska ..
xiriir iskaashi ma jiri lahaa? sidaa u fikiraa.
30 November 2019 ee 12: 09
ma ahan intaas oo dhan dhib, markii aad aragto sawirka weyn iyo xiriirada ka dhexeeya dhacdooyinka muuqda ee go'doon. Xaaladdan oo kale waxaad ku aragtay isagoo ka imanaya daraasiin mayl Ingiriis ah. Su’aasha ugu weyn ee aad naftaada isweydiin karto ayaa ah sidee baad umada ugu geysaa qafiska oo ugu dambeyntiina loogaga qaadaa? Isku day inaad u fikirto sida psychopath / sociopath ... way adag tahay waan ogahay. Aragtidayda ayaa ii sheegaya in tani ay tahay uun bilow, hawlgallo calan been abuur ah oo weyn ayaa socda, gaar ahaan waddamada EU / NATO.
30 November 2019 ee 15: 17
Salmon, shaki la'aan shaki ahaan masraxyo badan oo yurubiyan ah (midowday) ayaa ku soo socda ... waad ku dareemi kartaa taas oo laga yaabo inay xirnaadaan. Taliyihii hore ee booliiska Bouman wuxuu mar qoray buug cinwaankiisu yahay 'Towards a Police National', kaas oo, marka si dhaw loo baadhayo, ay ahayd inuu noqdo Gobolka Bilayska ee ku-meel-gaarka ah.
30 November 2019 ee 15: 39
Kormeer dhow, dhanka booliska transhuman transnaran transhuman transhuman
25 November 2019 ee 22: 44
Sawirkani wuxuu ina tusayaa sida caalamkeenu u shaqeeyo. Sida aad ku muujisay buuggaaga, sheyga ayaa jira oo keliya markaan ogaanno, ama taa beddelkeeda marka soo noqnoqoshadayadu ina soo gaarto. Haddii aan fahamsanahay sida ay u shaqeyso markaa xor ayaannu nahay. Haddii aanaan garanayn ama aan ogayn sida ay u shaqayso, ubaxa nolosha ayaa ku xidhan karaha, ama halkii sanduuqa x. Sida aad ku sharaxday maqaalkan, tusaale cad oo muuqda ayaa ah sida ay rabaan inay ku soo lifaaqaan tiro ahaan sanduuq.
Taasi waa sababta magacaygu u xun yahay maxaa yeelay waan ogahay in aan ku jiro quraaradda biyaha. Nasiib wanaagse sidoo kale waan ogahay inay jiraan wax asal ah iyo in quraarahani yahay wax aan dabiici ahayn.
26 November 2019 ee 00: 53
Waxaan wacayay muddo dheer, bidixuna waa Fas Fasis Cusub.
NL waxay noqotay kaligii-taliye mana jirto mucaarid dheeraad ah.
26 November 2019 ee 00: 57
Maahan wax ku saabsan bidix ama midig. Labadan isdabamarin ayaa si sax ah loogu abuuray is dhexgal si loo gaaro hadafka ugu dambeeya iyada oo loo eegayo muuqaalka iska soo horjeeda. Waxaan ku sharaxay taas qodobkaan:
26 November 2019 ee 01: 41
Calaamadaha ugu horreeya ee shuuciyadda ee samaynta (iyada oo loo marayo soosaareynta shirkadaha iyo bangiyada) ayaa laga soo sheegayaa England:
« Waa maxay sababta Trump uusan u ahayn antiist globalist laakiin aristocracy kale oo pawn ah
AIVD ayaa mar kale ka hortagtay weerar argaggixiso, ayaa sheegaya in AIVD iyo warbaahinta ay iibinayaan bandhigga »
dheeraad ah ee xubnaha
Booqashooyinka BY JULY 2017
Guud ahaan Wadarta: 15.862.951
Liibiya waxay bixisaa caddeyn ku saabsan wadamada Yurub ee ugu horreeya ee ay Turkiga qaadi doonaan
Ninka transgender wuxuu dhalaa cunugga cunugga lammaane laba-geesood leh oo ku deeqaya shahwada dheddigga ah
Nidaamka lidka diyaaradaha ee Iiraan ee qaatay Boeing 737-800 (dayuuradda PS752) ma la jabsaday?
Intee in le'eg ayuu Trump ku jiray saddle hadda oo ay calaamadaha ugu horreeya ee dagaalka sokeeye ay muuqdaan?
Iiraan, weerarkii Soleimani, isku dayga rasaasta iyo toogashada duulimaadka PS752 dhammaantood meel baa laga dejiyay?
Martin Vrijland op Liibiya waxay bixisaa caddeyn ku saabsan wadamada Yurub ee ugu horreeya ee ay Turkiga qaadi doonaan
SalmonInClick op Nidaamka lidka diyaaradaha ee Iiraan ee qaatay Boeing 737-800 (dayuuradda PS752) ma la jabsaday?
Riffian op Nidaamka lidka diyaaradaha ee Iiraan ee qaatay Boeing 737-800 (dayuuradda PS752) ma la jabsaday?
LA SOCO DIIWAANKA